रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको पौराई बजार टोलमा डेंगुको महामारी ! – HamroSamrachana
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको पौराई बजार टोलमा डेंगुको महामारी !
हाम्रो संरचना बिहिबार, कार्तिक ४, २०७८ 473 Views
२३ कार्तिक, रौतहट/ रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका १ पौराई बजार टोलमा डेंगुले महामारीको रुप लिएको छ । बस्ती नै महामारीको चपेटामा परेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन । एक साताअघि डेंगुको कारण सोही बस्तीका ३१ वर्षीय मोतिलाल गोलेको मृत्यु भएको थियो ।
ज्वरोले थलिएका उनलाई भरतपुर उपचारको लागि लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । अस्पतालका चिकित्सकले डेंगुको कारण गोलेको मृत्यु भएको पुष्टी गरे पछि गाउँहरु चिन्तित छन् ।
करिब तीनसय परिवारको बसोवास रहेको उक्त सुकुम्वासी बस्तीका प्रत्येक घरमा एक देखि तीनजना मानिसमा बिरामी भएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी राजेश साहले जानकारी दिए ।
‘बस्ती अधिकांश मानिस बिरामी परेका छन्,’ उनले भने, ‘धेरैमा डेंगुको लक्षण देखिएको छ । बस्तीलाई जोगाउन स्वास्थ्यकर्मीको विशेष टोली गाउँमा खटिनुपर्छ ।’ डेंगुको प्रकोप कम गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको तर त्यो पर्याप्त नहुँने उनले बताए ।
बस्तीका अधिकांश परिवारका सदस्यलाई उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, मांशपेसी दुख्ने लगायतका लक्षण देखापरेको उनले बताइन् ।